Akụkọ - Otu esi ahazi ihe ịchọ mma dị mma (nke a bụ ihe ị chọrọ ịma)?
Etu esi chepụta ihe ịchọ mma mara mma (nke a bụ ihe ịchọrọ ịma)?
Fọdụ n'ime ihe ndị kasị mkpa echiche mgbe emebe mara mma ịchọ mma nkwakọ bụ ndị a follows
Ofdị ihe nkwakọ ngwaahịa
Ebumnuche bụ isi maka nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma dị irè bụ ịchọpụta ụdị ihe eji eji nkwakọ ngwaahịa.
Ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ịgbatị oge ndụ nke ngwaahịa a. Ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị iguzogide ọgwụ corrosion, ma ghara imeghachi omume na kemịkal na ihe ịchọ mma, ma ọ bụghị ya nwere ike ibute nsị ngwaahịa. Ọ ga-enwerịrị ezigbo ihe ngosi ọkụ iji zere ìhè anyanwụ iji mee ka ngwaahịa na-emebi ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe.
Nke a na-eme ka o doo anya na ihe ịchọ mma dị mma iji ma jigide njirimara mbụ ha.
Ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịkwara inwe nguzogide na mmetụta siri ike zuru ezu iji kpuchido ngwaahịa ndị a kwakọbara site na mmebi na mmetọ n'oge njem. Ihe nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ịbawanye uru ngwaahịa.
(karama 15ml na-agbapụta mmiri karama, ihe PP, dị ezigbo nchebe iji jupụta mmiri ọ bụla, chee echiche kaadị, dị mfe itinye n'ime akpa)
Nkwakọ ngwaahịa nke ntecha kwesịrị ịdị mfe maka ịkpọtụrụ ndị ahịa. Nkwakọ ngwaahịa a ga-ergonomically e mere na mfe ịghọta na-eji kwa ụbọchị. Ekwesịrị ịmepụta nkwakọ ngwaahịa ahụ ka ọ ghara isi ike imeghe ma jiri ngwaahịa ahụ.
Maka ndị ahịa meworo okenye, nke a dị mkpa karịsịa maka ihe ịchọ mma n'ihi na ha ga-enwe ahụmịhe na-agwụ ike ịmeghe ngwugwu ma jiri ngwaahịa ahụ kwa ụbọchị.
Nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma kwesịrị ikwe ka ndị ahịa jiri ngwaahịa a na oke kachasị ma zere ịla n'iyi.
Ngosiputa Ngwa bu ihe di oke onu ahia, ha kwesiri inye ndi ahia mgbanwe mgbe ha na eji ha n’emefughi.
Ochie nke ntecha kwesịrị ịbụ magburu onwe na oru arụmọrụ na adịghị mfe ihihi n'oge na-akpụ akpụ usoro.
（Mkpọchi bọtịnụ nke Obere ịkpalite sprayer, nchebe iji）
Uzo doro anya na eziokwu
Maka nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma, ọ dị ezigbo mkpa iji ezi obi na ịkwụwa aka ọtọ gosipụta ihe niile na kemịkalụ eji arụ ọrụ.
Chemicalsfọdụ ndị ọrụ nwere ike nfụkasị ụfọdụ kemịkal, yabụ na ha nwere ike ịhọrọ ngwaahịa ahụ. Kwesịrị ịmepụta nke ọma na ụbọchị nrụpụta na ụbọchị ọhụụ iji nyere ndị ahịa aka ịzụrụ ngwaahịa.
Ngosiputa Ngwa na ngwa ha na akowaputara onwe ha, mana ikwuputa ntuziaka na akara ga enyere ndi ahia aka.
Aha mmado kwesiri ima nma ma jiri ihe osise mara nma dọta uche ndi ahia ma nyere aka iwulite mmata na mmata.
(anyị nwere ike ịme akara, mbipụta silk, ịpị ọkụ na karama, tupu imepụta nnukwu, anyị ga-enyere ndị ahịa anyị aka ịlele ma ọdịnaya ahụ ziri ezi)
Omume dị ugbu a na nkwakọ ngwaahịa ịchọ mma bụ imepụta dị mfe. Nzube a na-enye ọdịdị dị ọcha ma mara mma, na-enyekwa mmetụta nke ịchọ mma siri ike dị elu.
Designdị dị ọcha ma dị mfe dị ezigbo mma, nke na-eme ka ọ pụọ na asọmpi ahụ.
E jiri ya tụnyere nkwakọ ngwaahịa na-adịghị mma, ndị ahịa na-ahọrọ imewe dị mfe. Agba na font nke nkwakọ ngwaahịa kwesịrị ịdị na akara, si otú a na-enyere ndị ahịa aka ịmepe kọntaktị na ika naanị site na nkwakọ ngwaahịa ahụ.
A ga-egosipụta akara ụlọ ọrụ na akara ngosi ngwaahịa (ma ọ bụrụ na ọ bụla) na ngwugwu iji gosipụta akara ahụ.
（Anyị na ngwaahịa ndị anya nanị ma elu ọgwụgwụ, ọ na-nabatara site European na American ahịa）
Ngosiputa Ngwa nwere ike ichikota na ihe di iche iche. Fọdụ ụdị ụdị e ji eme ihe maka ihe ịchọ mma na-agụnye sprayers, nfuli, ite, akpa, ite mmiri, kom kom, wdg.
A ga-ekpebi ụdị akpa kacha mma dịka ụdị ịchọ mma na ngwa ya.
Họrọ ụdị akpa ziri ezi nwere ike melite nnweta nke ntecha. A na-ekpuchi ude mmiri dị elu na mgbapụta plastik, nke na-enye ndị ahịa ohere iji ya kwa ụbọchị.
Họrọ ụdị akpa akpa nwere ike inyere ndị ahịa aka ịmepụta echiche ziri ezi ma bulie ahịa.
(mgbe i mechara ncha ntutu na karama a, pịa obere, shampoo ga - apụta)